Maneran-tany: “Mi-tweet” ho an’i #Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2009 7:40 GMT
Ho fahatsiarovana ny tsingerin-taona voalohan'ny fanafihan'ny Israely an'i Gaza tamin'ny Desambra 2008, mafana fo maro no nanomana ny fanentanana “tweet for Gaza” tao amin'ny Twitter. Ilay fanentanana, ankalazain'ilay mpampiasa Twitter nmoawad tokoa, dia mikendry ny fifantohan-tsaina amin'ny fanjanahantany any Gaza amin'izao fotoana izao, ary hotanterahana amin'ny Alahady 27 Desambra, manomboka amin'ny 3 ora hatramin'ny 7ora hariva GMT, hiezahana hanaovana an'i #Gaza ho resaka malaza ao amin'ny Twitter.
Miray hina ho an'ilay hetsika ireo mpampiasa Twitter maneran-tany, ary na malaza aza “re-tweets” [Avy amin'ny mpandika: na mamerina mandefa indray ilay Tweet voaray], ambony ny isan'ireo olona mampiasa Twitter hizaràna ny hevitr'izy ireo manokana momba an'i Gaza, herintaona taorian'ireo fanafihana nahafatesana Palestiniana 1 417 sy Israeliana 13. Rime Allaf, Siriana mpampiasa Twitter , dia manazava ny dikan'izany ho azy:
Mizara ny heviny momba an'i Gaza i Rime Allaf
Nadine Moawad, mpikarakara ny fanentanana, dia mampianatra ny Twitter any Beirut mba hanomezana ny hery ilay fanentanana:
Hampianatra ny fanentanana amin'ny Twitter any an-toerana i Nadine Moawad
Joelle Hatem dia anisan'ireo nahazo ny fampianarana amin'ny antsipirihany ny Twitter. Amin'ny maha-mpampiasa Twitter vaovao, manoratra izy:
Mandray an-tsehatra amin'ilay fanentanana ilay mpampiasa Twitter vaovao Joelle Hatem
Ireo mpampiasa Twitter dia mampiasa ny teny fototra [hashtag] hanaparitahana vaovao ary koa hizaràna ny heviny manokana momba ny fahatsiarovana ny faha-herintaonan'ireo fanafihana. Sayed Dhansay, any Africa Atsimo, dia milaza:
Maneho ny heviny momba ny fahatsiarovana ireo fanafihana tany Gaza ilay mpampiasa Twitter “sayedm”
Ary any Brezila, ilay mpampiasa Twitterr Jus_C dia mizara ny heviny momba ny fanjanahantany any Gaza:
Hotontosaina amin'ny Alahady manomboka amin'ny 3ora hatramin'ny 7ora hariva GMT ny fanentanana, mandritra ny ora tena isian'ireo mpitsidika Twitter. Raha hanaraka ireo “tweets”, tsidiho ny teny fototra #Gaza.